KodExplorer: Zụlite weebụsaịtị site na ihe nchọgharị | Site na Linux
Luigys toro | | Aplicaciones, Apụta, GNU / Linux, Na-atụ aro
Mgbe m na-emepe emepe ebe obibi, ọ dị mkpa ime mgbanwe na koodu ahụ n'oge dị iche iche na mgbe ụfọdụ ọ na-arụ ọrụ site na kọmputa ndị na-enweghị ezigbo IDE. Onye na -eme nchọpụta enyere anyị aka nke ukwuu iji dozie mkpa ọ nwere inwe web HERE dị n'oge ọ bụla, ebe ọ bụ na nke a bụ njikwa faili na nchịkọta akụkọ weebụ nke enwere ike ịnweta site na ihe nchọgharị ahụ, ya bụ, anyị wụnye KodExplorer na sava ebe anyị nwere websaịtị ma nweta ya site na url ezubere maka habiteca, n'oge ọ bụla na ebe obula.
N'ezie ụfọdụ ga-eche na anyị nwere ike iji ọrụ ntanetị nke atọ nke na-enye anyị ohere ịrụ ọrụ ndị a, ma ọ bụ ghara ime nke ahụ, jiri nke ahụ cpanel (ma ọ bụ nchịkọta ọ bụla) nyere, dị ka anyị na-emeghị nke ahụ n'ihi na ọ gaghị ekwe omume anyị iji ọrụ ndị ọzọ (maka okwu nzuzo na nchekwa) na onye nchịkọta akụkọ cpanel ahụ yiri ka ọ dị anyị ezigbo mma.
1 Kedu ihe bụ KodExplorer?
2 KodExplorer Atụmatụ
3 Etu esi etinye KodExplorer
Kedu ihe bụ KodExplorer?
Onye na -eme nchọpụta bụ editọ weebụ na-emeghe emeghe na njikwa faili nke na-agba site na ihe nchọgharị ahụ, mepụtara na php ma na-arụ ọrụ na ikpo okwu ọ bụla.
Este web HERE na-enye gị ohere imepụta ibe weebụ ozugbo site na ihe nchọgharị ahụ, ọ nwekwara njikwa faili nke ị nwere ike ijikwa faịlụ ndị ị kwadoro na sava weebụ gị. ngwá ọrụ dị mma maka ndị chọrọ inwe ike ịnweta koodu isi nke weebụsaịtị ha n'oge ọ bụla.
N'etiti ọtụtụ atụmatụ na arụmọrụ nke ọmarịcha Web IDE nwere, anyị nwere ike ịkọwapụta ihe ndị a:
Open iyi na kpamkpam free.
Ọmarịcha interface dị ka sistemụ arụmọrụ site na ihe nchọgharị, menu ọnọdụ, ogwe ngwaọrụ, dọrọ na dobe, igodo ụzọ nweta kpọmkwem, n'etiti ndị ọzọ.
A sụgharịrị gaa n'ihe karịrị asụsụ iri anọ.
Ihe sara mbara iji jikwaa faịlụ anyị (detuo, ịkpụ, mado, ịkwaga, hichapụ, gbakwunye, mepụta folda, nyegharịa, ikikere, listi, gosipụta nha, lee thumbnail, ọkacha mmasị, wepụ faịlụ, nyocha faịlụ (onyonyo, ederede, pdf) , swf, akwụkwọ ...), vidiyo na ọkpụkpọ faịlụ ọkpụkpọ, wdg.
Ezigbo onye nchịkọta weebụ yana syntax na-egosipụta maka asụsụ 120 +, nkwado mkpado, na ọtụtụ ụdị nke ahaziri maka onye editọ ka ọ gbanwee ka ị si eme.
IDE Weebụ: HTML / JS / CSS nchịkọta akụkọ na Emmet agbakwunyere.
Live preview na syntax Checker.
Nchekwa onwe-zuru ezu na otutu keyboard ụzọ mkpirisi.
Mmekọrịta na ngwaọrụ ndị ọzọ.
Multiplatform, ọbụlagodi na ngwaọrụ mkpanaka.
Na nseta ihuenyo na-esonụ ị nwere ike ịghọta na nkọwa zuru oke banyere njirimara nke ngwa ọrụ a magburu onwe ya maka ndị mmepe weebụ.
Etu esi etinye KodExplorer
Nwere ike iwunye KodExplorer ọsọ ọsọ na enweghị ụzọ ọ bụla na usoro ndị a nke onye nrụpụta ya gosipụtara.
Wụnye KodExplorer site na koodu ntinye:
Ibudata ma wụnye KodExplorer site na nkwakọ ngwaahịa
You nwere ike ịnweta ngosi nke ngwa ahụ na ozi ndị a
Echere m na ngwá ọrụ a dị oke mma, gịnị ka ị chere? Hapu anyị na nkwupụta gị na echiche gị maka ọkaibe weebụ na njikwa faili a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » KodExplorer: Zụlite weebụsaịtị site na ihe nchọgharị ahụ
Ọ mara oke mma, ọ dị mma
ma ọ dị nwayọ nwayọ na ntakịrị aghụghọ maka onye mbido.
ugbu a, m ga-achọ ịmata otú e si ewepu KodExplorer
Ihe ị ga - eme bụ ihichapụ folda ị mepụtara, usoro mmụta dị mkpụmkpụ, ana m akwado ka ị tụlekwuo ya ntakịrị. M hụrụ ya n'anya, bara uru, magburu onwe ya editọ, wdg.
Ọ dị ka ọ dị mma, mana ngosi ngosi ahụ nwere ike ịnweta mmadụ niile. Agaghị m eji ya maka ọrụ m.
esi gbaa ọsọ site na mpaghara? i kwesiri itinye apache ya na php modul?
Akwụkwọ ngosi ahụ bụ ngosi maka anyị ka anyị wee nwee ike inwe ekele maka ọrụ ndị ahụ. N'ezie, na mpaghara gị, ị kwesịrị ịnwe apache ma hazie ya ka ọ dị mma.
ezigbo mma m na-eche ma ọ na-akwado ide nke jsp
Zaghachi nye samuel sanchez
Enrique Chukwu dijo
Kedu ụdị Cloud9 bụ ihe a? xD
Na mpụga njakịrị ọ na-atọ ụtọ, mana ọ na-adị m ka ọ dị ntakịrị karịa c9.
Zaghachi Enrique Morán
Ndoo ikwu ya, mana nke ahụ abụghị IDE weebụ, ọ bụ njikwa faili, nke na-eweta nchịkọta akụkọ nchịkọta akụkọ na mberede, mana enwere nnukwu ọdịiche dị n'etiti otu na nke ọzọ.
Kedụ ka m ga - esi mepụta ndị ọrụ ọhụụ nwere ikikere dị iche ?????
Nyocha Squid + PAM na CentOS 7- SMB Netwọk